Xildhibaan Mahad Salaad: Qorshaha Khaarijinta Ikraan Tahiil Waxaa Leh Fahad Yaasiin – Goobjoog News
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ayaa sheegay in Fahad Yaasiin oo ah madaxa basaasiinta Soomaaliya iyo Kulane Jiis ay mas’uul ka ahaayeen qorshaha lagu qaarijinayo basaasadda Ikraan Tahiil.
Xildhibaankan afka dheer ayaa intaa raaciyey in marka hore laga shaqeeyey in Ikraan dalka lagu soo celiyo, kadibna laga taqaluso, waxaa uuna caddeeyey in sidaa loo sameeyey si loo baabi’iyo xogo ay heyso oo ay ka mid yihiin dilkii Eng. Yariisow iyo arrimo kale.
Akhriso: Qoraalka Xildhibaan Mahad Salaad
Qorshaha khaarijinta Ikraan oo markii hore la rabay in la qariyo ayaa markii qoyskeeda qaylodhaantu ka soo yeertay Fahad Yaasiin isku dayay in uu Alshabaab lacag ku siiyo si ay u sheegtaan dilka Ikraan Tahliil lkn waa guul dareystay isku daygaas kadib markii ay soo farageliyeen sida la sheegay saraakiil sarsare oo Alshabaab ka tirsan qaraabo dhawna ay yihiin Ikraan.
Sababta Ikraan in la dilo loo go’aamiyay ayaa la ii sheegay labo arimood oo aad xasaasi u ah oo ay macluumaad ka heysay, kuwaas ku saabsanaa sidii loo qorsheeyay dilkii Allaha u naxariistee Eng Yariisow oo xaafiiskiisa ay madax ka ahayd iyo arimo waaweyn oo Fahad Yaasiin iyo Kulane Jiis ku lug leeyihiin!